Kingston Nucleum, iwo madoko ese aunoda eMacBook yako | Ndinobva mac
Kingston Nucleum, iwo madoko ese aunoda eMacBook yako
Sarudzo yaApple yekupa pamwe nezviteshi zvese zvequintessential laptop, iyo MacBook, uye kungoipa iyo USB-C yaive nenharo. Izvo zvaive zvakadaro neMacBook Pro, ine ina USB-C madoko asi isina yekare kadhi kuverenga, HDMI kana imwe yakajairwa USB.
Ndosaka zvichikosha kuve neadapter ine mhando dzakasiyana dzezviteshi, uye Kingston Nucleum inomiririra kuvakwa kwayo kwakasimba, madoko anowanikwa uye mashandiro. Takazviongorora uye tinokuudza zvatinoona.
Icho chigadzirwa chakanyatsogadzirwa, chakasimba uye chakasimba kunze kwebhokisi. Ini ndatoedza akawanda maadapter erudzi urwu uye mune chimwe chazvo handina kana kunzwa kwekuve pamberi peimwe zvakare yakavakwa seNucleum iyi. Iyo yakakura kupfuura dzimwe, ichokwadi, uye inorema, asi iwo madhaidhi asina kana kukosha kudiki uchifunga kuti ichaenda muhombodo yangu ne laptop yangu. Aluminium uye mapurasitiki ndizvo zvinhu zvinoshandiswa mune ino concentrator, uye magumo anoenderana neayo anofanirwa kupihwa nemhando yakadai saKingston.
Zviteshi zvinopihwa zvinosanganisira maviri USB-A 3.1, imwe USB-C yekuchaja laptop, imwe USB-C 3.1, microSD UHS-I muverengi, imwe SD UHS-I uye II muverengi, uye 1.4K inoenderana HDMI 4 chiteshi. Semushandisi weMacBook ndinoona zvichinyatsoita kuve nechiteshi cheUS-C kubhadharisa laptop yangu uye imwe yekufambisa data, nekuti maadapter mazhinji erudzi urwu anongosanganisira chiteshi cheUS-C, uye kana iwe uchichaja laptop yako unayo izvozvo port isina kushandiswa zvachose. Kubatana kwakatsiga, pasina kurasikirwa kwekubatana panguva yekufambisa faira.
Simba rekuchaja rinopihwa neiyi adapta inosvika ku60W, inova dambudziko chete neMacBook Pro 15, inoda 87W. Iwo ma13 ″ kana MacBook 12 ″ mamodheru anokwanisa kuchengeta bhatiri ravo pa100% iwe uchishanda neNucleum iyi. Ruzivo rwakakosha: panguva yekufambisa faira iwe haufanire kubatanidza charger kana kuibvisa, sezvo iyo adapta yakabviswa mune chero mamiriro, uye kuchinjiswa kuchikanganiswa. Kuziva kuti izvi zvinoitika hakuna kukosha kukuru, asi iwe unofanirwa kuzvifunga.
Kingston's Nucleum idhijitari-doko adapter ine yekuvaka uye mhando yezvinhu zvinomira kunze kwemakwikwi. Iyo kumhanyisa kwayo madoko eUSB, iine maviri USB-C madoko uye ichibvumidza simba rekuchaja rinosvika 60W riite imwe yeakanakisa dzimwe nzira kune avo vanoda yakavimbika uye yakasimba kifaa. Inowanikwa nezve € 65 muzvitoro zvakaita seAmazon () inodhura kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvakafanana kubva kumakwikwi asi mutsauko unoonekwa kunze kwebhokisi. Ehe, bhegi rekutakura rakashaikwa.
Unhu hwezvinhu uye zvinogumisa
Mavara maviri e USB-C (kuchaja + data)
Kusvikira 60W mutoro
Pasina kutakura bhegi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Kingston Nucleum, iwo madoko ese aunoda eMacBook yako
Kudzokera kuchikoro kune yako MacBook, ita kuti ive yakanaka kune gore idzva